Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Tanànan'ny Etazonia 2021 tsara indrindra hankalazana ny fahefatry ny Jolay
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Matetika ny olona no miara-mivory mandritra ny fialantsasatra amin'ity taona ity, fa ny fanavakavahana ara-tsosialy no fanao tamin'ny taon-dasa.
48 tapitrisa ny Amerikanina handeha 50+ kilaometatra avy any an-trano ho an'ny 4th Jolay.
Mikasa ny handany $ 7.5 miliara amin'ny 4 ny Amerikaninath sakafo Jolay.
64% ny Amerikanina mahatsiaro mahaleo tena ara-bola amin'ity 4 Jolay ity.
Miaraka amin'ny Amerikanina mikasa ny handany $ 7.5 miliara amin'ny 4th ny fankalazana ny volana jolay tamin'ity taona ity, namoaka tatitra momba ny toerana tsara indrindra sy faran'izay ratsy indrindra tamin'ny 2021 ny fankalazana ny faha-4 jolay, ary koa statistika mahaliana momba ny fialantsasatra ao amin'ny Coronavirus sy 4th tamin'ny volana Jolay.
Mba hamaritana ny toerana tsara indrindra hankalazana ny fotoana be kintana indrindra dia nampitahain'ny manam-pahaizana ny tanàna 100 lehibe indrindra any Etazonia miorina amin'ny fandanjalanjany ny vidin'ny fialan-tsasatra sy ny fahafinaretana. Ny angon-drakitra metrika manan-danja 23 dia manomboka amin'ny salan'isa amin'ny vidin'ny labiera sy divay ka hatramin'ny faharetan'ny afomanga aseho amin'ny toetr'andro fahefatra Jolay.
Tanàna tsara indrindra hankalazana ny fahefatry ny jolay
10. St. Paul, MN 20. Filadelfia, PA
Zava-misy & tarehimarika tamin'ny 4 Jolay
$ 7.5 Miliara: Ny amerikana marobe dia mikasa handany amin'ny 4th sakafo Jolay.
150 tapitrisa: Isan'ny alika mafana nohanina isaky ny 4th ny volana Jolay.
$ 1.4 + miliara: Ny amerikana marobe dia mikasa handany amin'ny 4th labiera sy divay tamin'ny Jolay.
80%: Fizarana afomanga misy ny afomanga izay nofoanana tamin'ny taona 2020 noho ny areti-mandringana.
$ 1.5 + miliara: Tombanana ho vola lany amin'ny afomanga amin'ny taona 2020 (73% ny afon'ny afomanga dia mitranga ao anatin'ny iray volana 4 Jolay).
$ 6.7 tapitrisa: Ny sandan'ny sainam-pirenena amerikana hafarana isan-taona.
48 tapitrisa: Isan'ny olona mandeha 50+ kilaometatra avy any an-trano ho an'ny 4th Jolay.
Fanadihadiana lehibe momba ny fanadihadiana
Maka ny dia. 37% bebe kokoa ny Amerikanina handeha amin'ity 4 Jolay ity raha ampitahaina tamin'ny taon-dasa.
Tsy tena ilaina ny afomanga. 62% ny Amerikanina no tsy mieritreritra fa ny governemanta eo an-toerana dia tokony hampiasa dolara mpandoa hetra ho an'ny fampisehoana afomanga amin'ity taona ity.
Fanambarana ny fahaleovan-tena ara-bola. 64% ny Amerikanina mahatsiaro mahaleo tena ara-bola amin'ity 4 Jolay ity.
Mitahiry vs. mandany. 62% ny Amerikanina mino ny fitehirizana vola dia tia tanindrazana kokoa noho ny fandaniana azy.
Bebe kokoa amin'ny fandaniana ny fetin'ny fahaleovantena. 36% ny Amerikanina no mandany vola bebe kokoa amin'ity 4 Jolay ity raha ampitahaina tamin'ny taon-dasa.
Manodidina ny 36% ny Amerikanina mikasa ny handany vola bebe kokoa amin'ny 4th tamin'ny Jolay tamin'ity taona ity raha ampitahaina tamin'ny tamin'ny taon-dasa. Midika izany fa matetika ny olona no miara-mivory mandritra ny fialantsasatra amin'ity taona ity, fa ny fanavakavahana ara-tsosialy no fanao tamin'ny taon-dasa. Raha kivy ny olona tamin'ny diany tamin'ny taon-dasa ho an'ny 4th tamin'ny volana jolay dia amerikana 37% bebe kokoa no handeha amin'ity taona ity.
Ny vaovao mampahery dia ny 64% amin'ireo Amerikanina mahatsiaro tena mahaleo tena amin'ity 4 ityth tamin'ny volana Jolay, izay mampiseho fa mihatsara ny fahasimbana vokarin'ny valanaretina COVID-19 izahay. Raha tsy misy ny fepetra mandrisika nataon'ny governemanta hanohanana ny olona sy ny orinasa kely dia mety ho ambany kokoa ny isan'ny olona mahatsiaro tena mahaleo tena ara-bola.
Amerikanina manodidina ny 62% no mino fa ny fitehirizana vola dia tia tanindrazana kokoa noho ny fandaniana azy izao, izay misy dikany satria maro ny olona no voafafa tamin'ny areti-mandringana. Ny olona manangana ny tahiriny dia mety tsy hiankina amin'ny fanohanan'ny governemanta, izay manafaka loharanon-karena bebe kokoa hampiasain'ny firenena amin'ny zavatra lehibe hafa, toy ny fahasalamana sy fotodrafitrasa ho an'ny daholobe. Ny fandaniam-bola dia mety ho tia tanindrazana ihany koa, satria manentana ny toekarena ary manampy ny firenena hivoatra.
Manodidina ny 62% ny Amerikanina no tsy mieritreritra fa ny governemanta eo an-toerana dia tokony hampiasa dolara mpandoa hetra handoavana ny afomanga mampiseho an'ity 4 ityth Jolay. Na dia heverina ho foto-tsakafo 4 aza izy ireoth tamin'ny fankalazana ny volana jolay dia lafo vidy ny afomanga ary aleon'ny olona mijery ny volan-ketra mandeha any amin'ny zavatra tena ilaina kokoa rehefa sitrana ny firenena noho ny areti-mandringana COVID-19.